वि.सं. २०७२ साल पुस १ मा निर्वाचित नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)लाई विघटन गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले तदर्थ कमिटी गठन ग¥यो। पुस १८ को उक्त तदर्थ कमिटीको संयोजकका रूपमा थिए, राखेपका वर्तमान सदस्यसचिव रमेश सिलवाल। त्यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद(आइसिसी)ले सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै ०७३ वैशाख १३ मा क्यानलाई प्रतिबन्ध गरेको थियो।
तत्कालीन राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार बिष्टले निर्वाचित क्यान मान्यता नदिई तत्कालीन एमालेका निकट र वर्तमान सदस्यसचिव सिलवालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरे। त्यससँगै निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वले अन्याय भएको भन्दै पुष २८ गते सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर ग¥यो।
त्यसको चार महिनापछि नै आइसिसीले नेपाली क्रिकेटभित्र सरकारी हस्तक्षेप भएको निर्णयसहित क्यानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसबीच आइसिसीकै सक्रियतामा बिवाद समाधानका पहलहरू भए। बिवाद समाधानका लागि आइसिसीले नै बनाएको स्वतन्त्र समितिले आगामी असोज १० र ११ गते क्यान निर्वाचन गर्ने वातावरण सिर्जना ग¥यो।
असोज ३ का लागि बोलाइएको क्यान साधरणभा एक साता पछि सार्नु भनेको नौटङ्की हो। के अर्थ भयो। यो समय सार्न नेपालको करिब ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। आइसिसीका दुई प्रतिनिधिको आवतजावत हवाई खर्च होटलमा बसोबासको व्यवस्था गर्नु प¥यो। यो सबै क्यानले पाउने रकमबाटै काटिने होइन र ? एउटा मान्छेको सनक र अहमताले नेपाली क्रिकेटले घाटा बेहोर्नुप¥यो।
तपाई चाँही नेतृत्वमा आउनुभयो भने आर्थिक पारदर्शिता हुन्छ त ?
अहिले हामी निर्वाचनको संघारमा छौ, चार वर्ष अघि निर्वाचनमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दा नेपाली क्रिकेटले निलम्बन भोग्नप¥यो। फेरि, पनि यही अवस्था नआउला भन्न सकिएला ?
आइसिसीको यो अन्तिम बटमलाइन हो। त्यसकारण हामी आइसिसीले भनेको कुरा टार्दैनांै र अन्यले गरे भने पनि दन्डित हुन्छन्। किनकी, आइसिसीकै निर्भरमा मात्र क्रिकेट चल्दैन र विकासका लागि संस्था नै चाहिन्छ।
पछिल्ला पटक देशभित्र स्तरीय प्रतियोगिताहरू धेरै भए पनि मनोरञ्जनमा मात्र सीमित हुन्छ। त्यसलाई दीर्घकालीन विकास ल्याउँदैन। त्यसकारण यसपटक आइसिसीलाई बाइपास गरेर जाने अवस्था छैन। तर यसको अर्थ आइसिसीले भनेका सबै गलत कुराहरु हामीले मान्न तयार हुनुपर्छ भन्ने चाँही होइन। हामीले आइसिसीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको परिस्थितिले यो भन्छ, यो कुरालाई यसरी सच्चाएर जाउँ भन्नुपर्छ। हामी सधंै आइसिसीसँग सहकार्य गर्न तयार छौं। आइसिसी पनि एउटा कुरामा स्पष्ट छ, यदि सरकारले स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचन गर्न दियो भने अक्टोबर १३ को आइसिसी बैठकबाट निलम्बन फुकुवा गर्ने योजनामा छ।
अहिले ग्रासरुट कार्यक्रममा ध्वस्त छ। हामी त्यसलाई पुनः ब्युताउँछांै। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा खेलाडी आउने वातावरण सिर्जना गर्न क्लब, जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय क्रिकेटलाई प्राथमिकतमा राख्नेछौं। क्यान निलम्बन अघिको राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता र अहिले राखेपको अगुवाईमा सम्पन्न प्रतियोगिताको स्तरमा आकाशजमिन फरक छ।
फेरि दोहो¥याउँछु, यसअघि एक पटक नेतृत्च्वमा आए पनि काम गर्ने अवसर पाइनँ। तलब खान या पैसा कमाउनका लागि क्रिकेट नेतृत्वमा आउन चाहेको होइन। त्यसैले म प्रतिबद्ध भएर नेपाली क्रिकेट विकासमा लाग्छु। राम्रो काम गरेर नाम कमाउनेछु। तर, राम्रो काम गर्न सकिनँ भने दण्ड भोग्न तयार छु।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०७६ १२:२२ शनिबार